Okusha Ukuze Kudliwe
Amagilebhisi asetafuleni angamagilebhisi akhiqizwa ukusetshenziswa okusha njengesithelo. Lokhu kuzihlukanisa ngaphandle kwamagilebhisi akhiqizwa ukwenza ujusi wamagilebhisi, iwayini noma omisiwe. Amagilebhisi abizwa ngeVitis vinifera futhi adabuka esifundeni saseMedithera. Ukutshalwa kwamagilebhisi afuywayo kunomlando wasendulo, owaqala cishe eminyakeni engama-6000 edlule eMiddle East.
Amagilebhisi ayisithelo, esiqukethe amalulwane amajikijolo. Izihlahla zomvini zikhula ezivinini, eziqhakaza ekuqaleni kwentwasahlobo, bese izimbali ezincane zihanjiswe zombili izinyosi nangokuvalelwa komoya. Izihlahla zamagilebhisi zikhula futhi zikhule entwasahlobo futhi zilungele ukuvunwa kusukela ekuqaleni kukahlobo. Imivini yamagilebhisi iyanqunyelwa, njengoba ekwindla imivini ilahlekelwa amaqabunga bese ihluma futhi ngokukhula okusha kwamaqabunga ekupheleni kobusika.
Amagilebhisi akhula emvinini futhi ekukhiqizweni kwamagilebhisi etafula lentengiso, imivini iqeqeshelwa kwi-trellis. Lokhu kwenzelwa ukukhulisa umvini emhlabathini kanye nokuvumela imvini ikwazi ukusabalala kwi-trellis ukwenza imisebenzi yokukhiqiza. Ngaphandle kokuxhaswa kwe-trellis, imivini isakazeka emhlabathini noma ikhuphuke ngezakhiwo eziseduzane njengama-creepers. Amagilebhisi asatshalaliswa ukusikwa futhi ngenxa yokuba khona kwezifo emhlabathini njenge phylloxera, imivini eminingi yamagilebhisi ihlanganiswe futhi inezinhlobo ezimbili ezahlukene. Izinhlobonhlobo ezifiselekayo zokukhiqizwa zikhula ngaphezu komhlabathi kepha zixhunyelelwe emvinini we-isipikili ovimbela izifo.
Amagilebhisi asetafuleni abe nokuhlukahluka okune mbewu futhi kungenambewu. Namuhla izinhlobo ezingenazinbewu ziyizinhlobo ezithandwa kakhulu. Amagilebhisi ahlukahluka ngokuya ngemibala, usayizi wama berry nesimo, kanye nokunambitheka nokufaneleka ezimweni ezikhula ezifundeni. Izigaba ezintathu zemibala yamagilebhisi mnyama (onsomi kuya komvini omnyama), obomvu (obomvu ngokubomvu, amagilebhisi abomvu kanye apinki) nomhlophe (green-green to grig green grapes). Amagilebhisi ayizithelo ezingeyona-climacteric, okusho ukuthi awavuthwa futhi uma esevuniwe.
Abakhiqizi abakhulu kakhulu bamagilebhisi etafuleni akhiwe eNyakatho Nenkabazwe. Izwe elikhiqiza imiqobelo enkulu kunazo zonke yamagilebhisi asetafuleni yiChina elandelwa yiNdiya, Uzbekistan, Italy ne-United States....more